नेप्सेमा नयाँ रकर्ड, एकैदिन ६ अर्बभन्दा बढीको कारोवार
४ मंसिर,काठमाडौं । साताको पाँचौ दिन बिहीवार सेयर कारोवार नेप्से दोहोरो अंकले बढेको छ । आज समग्र कारोवार ६ अर्व रुपैयाँ नाघेको छ ।
आज नेप्से परिसूचक ३६.३२ अंकले बढेर १७७८.१२ विन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै ठूला कम्पनीहरुको कारोवार मापक सेन्सेटिभ पनि ४.९८ अंकले बढेर ३३४.०७ बिन्दुमा पुगेको नेप्सेले जनाएको छ ।
आज सबै कम्पनी उपसूचक समुहको परिसूचक उकालो लागेको छ । आज सबैभन्दा बढि निर्जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले कमाएका छन । उनीहरुले ३९९.१६ अंकले कमाएका छन् ।
आज कूल सूचिकृत मध्ये १९८ कम्पनीको ६ अर्ब ११ करोड ६७ लाख ३० हजार ७१ रुपैयाँ वरावरको १ करोड ४० लाख ६२ हजार ५०७ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ भने तिनको कारोवारमा ५६ हजार ३४१ पटक लेनदेन भएको छ ।
आजको कारोवारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले सबैभन्दा बढि कमाएको छ । उसले मात्र १८४९ अंकले कमाउदै १० प्रतिशतको वृद्धि कायम गरेको छ । त्यस्तै अंकका आधारमा बोट्लर्स नेपाल(८४४), साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन(६५५) लगाएतका कम्पनीका लगानिकर्ताले कमाउँदा यसबियल डिभेन्चर २०८२(२२), प्रभु बैंक डिभेन्चर २०८४ (२४), शिखर इन्सुरेन्स लिमिटेड(१२) लगायतका कम्पनीका लगातिकर्ताले गुमाएका छन् ।
आजको बजारमा कारोवार रकमको आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी शिर्ष स्थानमा रह्यो । उसको मात्र ४१ करोड ८ लाख ४५ हजार ३१० रुपैयाँ वरावरको ३ लाख ७७ हजार ७९९ कित्ता सेयर किनबेच भयो । कारोवार बन्दहुँदा उसको प्रतिकित्ता सेयर मुल्य १११० रहेको छ । त्यस्तै हिमालयन डिस्टिलरि लिमिटेड, नेपाल लाईफ इन्स्याेरेन्स र नेसनल लाईफ इन्स्याेरेन्स क्रमश दोश्रो, तेस्रो र चौथो स्थाानमा रहे ।
कारोवार संख्याको आधारमा सानिमा जनरल इन्स्याेरेन्स कम्पनी लिमिटेड शिर्ष संथानमा रह्यो । त्यस्तै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, रिलायन्स लाईफ इन्स्याेरेन्स कम्पनी र जनरल इन्स्याेरेन्स कम्पनी क्रमश दोश्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा रहे ।
आजकाे काराेबारमा कुल सूचिकृत कम्पनी मध्ये १३३ कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छनभने २३ कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । त्यस्तै १६ कम्पनीको कारोवारमा कुुनै पनि परिवर्तन नभएको नेप्सेले जनाएको छ ।
Total Turnover Rs: 6,116,730,071
Total Traded Shares 14,062,507
Total Transactions 56,341
Total Scrips Traded 198
NEPSE 1,778.12 36.32 2.08
Sensitive 343.07 4.98 1.47
Float 120.99 1.88 1.58
Sen. Float 110.34 1.13 1.03
Banking 1,322.48 2.71 0.21
Trading 2,193.94 198.4 9.94
Hotels 2,118.59 181.63 9.38
Development Bank 2,098.92 28.99 1.4
HydroPower 1,448.07 21.63 1.52
Finance 889.22 13.76 1.57
Non Life Insurance 9,610.63 399.16 4.33
Manu.& Pro. 3,833.87 204.73 5.64
Others 1,370.69 58.15 4.43
Microfinance 2,769.18 46.38 1.7
Life Insurance 11,126.86 376.15 3.5
Mutual Fund 11.78 0.07 0.63